Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo u safray dalka Jabuuti - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo u safray dalka Jabuuti
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo u safray dalka Jabuuti
August 18, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Farmaajo. [Xigashada Sawirka: AFP]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah u safray dalka Jabuuti.
Farmaajo ayaa martiqaad ka helay dhiggiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, waxaana safarkiisu uu qaadan doonaa muddo labo maalmood ah, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxtooyada.
Jabuuti oo ah dal yar oo kuyaala Geeska Afrika, ayaa kamid ah wadamada ku tabarucay ciidamada AMISOM ee howlgalka nabad ilaalinta ku jooga gudaha Soomaaliya.
Madaxweyne Deni oo magacaabay shan kamid ah guddiga doorashooyinka Puntland
Xubnaha cusub ee guddiga doorashooyinka Puntland oo la dhaariyay
Madaxweynaha Puntland oo dhagax dhigay waddo laami ah oo isku xiri doonta Garoowe iyo Taleex
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah dhagax dhigay waddo laami ah oo isku xiri doonta Garoowe iyo Taleex. Wadada oo dherergoodu tahay 90km ayaa waxaa dhaqaalaha ku bixi [...]
UK oo safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya
London-(Puntland Mirror) UK ayaa u dooratay Ben Fender OBE safiir cusub oo u qaabilsan Soomaaliya, sida Xafiiska Arrimaha Dibada UK uu ku sheegay boggiisa Internetka. Ben Fender OBE ayaa badali doona David Concar. Waxaana uu [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sharci daro ku tilmaamtay heshiiska u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Wasaaradda Gaadiidka Badda [...]